गीत संगीत मानव जीवनको स्पन्दन हो–इन्दिरा भट्टराई,गायिका – Ramro Sandesh गीत संगीत मानव जीवनको स्पन्दन हो–इन्दिरा भट्टराई,गायिका – Ramro Sandesh
गीत संगीत मानव जीवनको स्पन्दन हो–इन्दिरा भट्टराई,गायिका
आज भोलि म गित सँगित क्षेत्रमा नै ब्यस्त छु भन्नू पर्छ मेरो नयाँ नाँचौ मितिनी तिज गित आएको छ ।
० सुरुका दिनहरुको बारेमा बताउनुहोस गायन क्षेत्रमा कसरी लाग्नु भयो ?
म पढाईको सिलसिलामा काठमाडौं आए २०६५ सालमा तेति बेला राष्ट्रिय नाचघरमा निशुल्क सँगीत सिकाइने गरिन्थ्यो । गोर्खापत्रमा समाचार पढे interviw दिए त्यस पछि सँगीत सिक्दै गित गाउन थाले यसैगरी म गित सँगीत क्षेत्रमा लागेको हु ।
० पहिलेको गित सँगित र अहिलेको गित सँगितमा तपाईं के फरक देख्नु हुन्छ ? धेरै बिकृती आएको होइन अहिलेको गित सँगितमा ?
पहिले एक्दमै मौलिक मन छुने सदाबहार गितहरु बन्थे सुनिरहु जस्तो लाग्थ्यो भिजिरहु जस्तो लाग्थ्यो तर आज भोलि जस्ता पनि गित बन्न थालेका छ्न यसले गर्दा दिनमै चर्चामा आउने अनि लोप हुने खालका गित सँगीत बढेको छ । यस्तो नहोस् सबै घर परिवार बसेर हेर्ने मिल्ने खालको गित सँगीत बन्नु भन्न चाहान्छु ।
० तपाईंले धेरै जसो दुःख पिडाका गित बढि गाउनु हुन्छ किन ?
मलाई सुगम सँगीत मन पर्छ । कम्पोजिसन जस्तो बनेको हुन्छ । गितको त्यस्तै गित गाउने हो । जिवनमा दुख पीडा आफ्नो आफ्नो सबैको हुन्छ हैन र ? मलाई त्यस्तै गित गाउन मन पर्छ । दुख पिडाको गित गाउदा त्यसमा डुब्दा अर्कै आनन्द आउँछ ।
० कलाकारिता क्षेत्रमा किन एक कलाकारले अर्को कलाकार लाई सम्मान गर्न जान्दैनन् ?
त्यो आ–आफ्नै कुरा हो । मलाई सबैले माया गर्नु हुन्छ सहयोग गर्नु हुन्छ । म पनि सबै लाई माया सहयोग र सम्मान गर्छु ।
० तपाईंले गाउनु भएको सबैभन्दा चर्चित गित कुन हो ? किन त्यो गित दर्शक श्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल भयो ?
पप गित Newroad ma accident गितले धेरै दर्शकश्रोताको मन मुटुमा बसेको थियो । आधुनिक मायाको घर जालाएर गयौ, तिमी हास्दा हासौला गितले मलाई गायिका इन्दिरा भट्टराई भनेर चिनाउन सफल भएको थियो ।
७० भन्दा माथी गाएको छु ।
आज सम्म सन्तुष्ट छु ।
पहिलाको जस्तो सिडि क्यासेट बिक्ने जमाना छैन । आधुनिक प्रबिधि आयो स्टेज प्रोग्राम मात्रै हो । आज भोलि अलि मुस्किल छ । गायन सग सङै केही कामहरु नि गर्दै जानू पर्छ ।
म आफै मेहनत गर्छु मैले केही गर्नु पर्छ भन्ने भावना थियो त्यसैले निरन्तर यो क्षेत्रमा लागिरहेको हु ।
० कस्तो गायिका बन्न मन छ ?
सबै दर्शक श्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल र मलाई आधुनिक गायिका बन्न मन पर्छ ।
० लोकगीत कस्तो होस् जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो सस्कृती हो । जुन बोलि झल्किने खालको गाउँ पाखा पखेरु रिति रिवाज परम्परा सबै समेटिएको हुनु पर्छ ।
० पछिको योजना के बनाउनु भएको छ ?
मेरो एक मुठी सास रहुन जेल गित सँगीतलाई जिवन्त राख्ने छु ।
० अब नयाँ आउने कलाकार लाई तपाईंको सुझाव ?
नयाँ प्रतिभाहरु धेरै राम्रा हुन्छन् । वहाहरुलाई सिकेर अध्यय गरेर पोख्त भएर यस क्षेत्रमा लाग्नु होस भन्न चाहान्छु ।
० अन्तमा …..?
गित संगित मानव जिवनको स्पन्दन हो । गित भावनाहरुको अभिव्यक्ति गर्ने सर्बोत्तम माध्यम हो । त्यसैले मलाई माया गर्नु हुने मेरा गित हरुलाई सुनेर हौसला दिनु हुने बिभिन्न संचार माधयममा मेरा लागि कलम चलाएर साथ सहयोग गर्नु हुने सम्पुर्ण मेरा शुभचिन्तक महानुअभाबहरुमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । साथै तपाईं लगायत तपाईंको मिडियालाई मेरा मनका कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद । –नव क्षितिज साप्ताहिकबाट
खोला खोल्सी सार्वजनिक गर्दै बिक्रमजंगले गरे आश्रमलाई सहयोग
उग्रतारा साकोसको सत्रौै बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना
गायिका स्मृति गौतमको ‘लाग्यो भिसा’
गायक एंव संगिताकार कर्साङ लामाको ‘ह्राङलान नाम्सा’ बजारमा
भर्चुअल कविता प्रतियोगिताका लागि कविता आव्हान
आखिर को हुन मुक्ति विष्ट किन लागी रहेका छ्न, दिनरात नभनी जनताको सेवामा
नमोबुद्धमा केन्द्रीयस्तरको ‘युथ इनोभेसन सेन्टर’को काम सुरु
काभ्रेमा आज थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि